Akwụkwọ nri kpọrọ nkụ
Vermicelli iko noodle
Ihe omumu ihe omimi nke ahihia nke Ruisheng nke emeputara ka etinyere ya aru
Post oge: Jun-30-2021
Akwukwo nri achicha bu akpiri nku nke mbu nku, ma emesia egwepịa ya, akwukwo nri bu ihe agbakwunye nke akwukwo nri. Factorylọ ọrụ anyị malitere ịkwalite ihe ọmụmụ ihe ọkụkụ na-eme ka mmiri gwụ na njedebe nke 2020, ma kwalite ya n'oge na-adịbeghị anya wee tinye ya na mmepụta. Anyị f ...GỤKWUO »
2021 SIAL China International Food and Beverage Exhibition ẹkenịmde dị ka ndokwa
Post oge: Mee-20-2021
Otu n’ime mmemme nri atọ kacha elu n’ụwa, Nnọkọ Chain nke World Food Industry kwa afọ, SIAL China International Food and Beverage Exhibition, emere na May 18 na Pudong International Convention and Exhibition Center na Shanghai, China. Na-ekpughe ihe ọ beụ coverụ na-aba n'anya, mmiri ara ehi, snac ...GỤKWUO »
N’April, ọnọdụ ahịa ahịa 2021 nke China nke citric acid, xanthan gum
Post oge: Mee-05-2021
Kemgbe 2021, ọnụahịa citric acid dị na China arịgoro, yana mmụba kwa afọ nke 60.81% metụtara 2020. Nke ahụ bụ 54.55% mmụba kwa afọ ma e jiri ya tụnyere 2019. Eprel 20, 2021. nke acid citric dị na China malitere ịkwado, mana ọnụahịa ahụ anọgideghị na-ebili. Ugwu ...GỤKWUO »
Noodles iko na-ekpo ọkụ ma na-atọ ụtọ nwere ọdịnihu dị mma n'ahịa ụwa
Post oge: Apr-22-2021
Kemgbe njedebe nke 2020, e rerela akpa akpa nke ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na nke iko kpụgara na Malaysia na ahịa Malaysia. Ogo nke uto ya enwetala ihu ọma na mmata nke ndị na-azụ ahịa. The ahịa nyefere ngwaahịa a ọkachamara na nzukọ nke anụmanụ s ...GỤKWUO »
Developedga nke ọma mepụtara vegan na-ekpo ọkụ ma na-atọ ụtọ noodle kpụgara Malaysia
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ nke nyocha na mmepe na ule, na November 18, 2020, Jiaxing Ruisheng International Trade Co., Ltd. na ụlọ ọrụ mgbada ala Anhui Three Brothers Potato Industry Co., Ltd. jikọrọ aka mepụta vegan na-ekpo ọkụ ma na-atọ ụtọ noodles maka mbupụ na Malaysia. Ihe a ...GỤKWUO »
Ọdịnihu dị n'ihu nke Noodles Starch ozugbo
Post oge: Ọkt-19-2020
N'okpuru mmetụta nke ụlọ ọrụ nri niile dị mma, ọmarịcha poteto noodles na-ewu ewu n'etiti ndị na-eri afọ niile n'ihi ịdị nro ya, ụtọ dị iche iche na uru dị elu. Na-adaba adaba, ngwa ngwa ma baa ọgaranya na eriri nri, vitamin na nri ndị ọzọ. Nsonaazụ gosiri na ...GỤKWUO »
Nchọpụta na nyocha nke ụlọ ọrụ akwụkwọ nri na-eme ka mmiri sie ike na China na amụma nke atụmanya ule ahịa ahịa (2018-2025)
Akwukwo nri a kpochapụrụ, nke a makwaara dị ka akwụkwọ nri rehydrating, bụ akwụkwọ nri ọhụrụ mgbe ịsachara, ihicha na nhazi na mmepụta ndị ọzọ, wepụ ọtụtụ mmiri na akwụkwọ nri ma mee nke akwụkwọ nri akọrọ..dị agba mbụ na nri na-edozi ahụ adịghị agbanwe agbanwe. ...GỤKWUO »
L - Phenylalanine (PHE), Lactic acid zinc, L - Glutamine, Mmiri akpọnwụ akpọnwụ, Taurine, Onyinye,